डिवाससीसी भक्तपुरले गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय – WASHKhabar
डिवाससीसी भक्तपुरले गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय
Friday, June 7, 2019 335 पटक हेरिएको
भक्तपुर : जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डिवाससीसी) भक्तपुरको बैठक शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बस्यो । समितिका प्रमुख नवराज गेलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह मनाउने बिषयमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जेठ २६ गते आइतबार बिहान ७ः३० बजे भक्तपुर जिल्ला अस्पताल परिसरमा भेला भएर परिसरको सरसफाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य महासंघ, डिवास सीसी ले आ आफ्नो क्षेत्रमा सूचना गरी सबैको सहभागितामा सरसफाइ सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै सरसफाइका लागि आवश्यक माक्स, पञ्जाको ब्यवस्था नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भक्तपुरले र कुचो, बाल्टिन लगायतका सामग्री खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुरले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जेठ २६ गते आइतबार बिहान ७ः३० बजे भक्तपुर जिल्ला अस्पताल परिसरमा भेला भई परिसरको सरसफाइ गर्ने निर्णय गरियो । यसका लागि जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य महासंघ, डिवास सीसी ले आ आफ्नो क्षेत्रमा सूचना गरी सबैको सहभागितामा सरसफाइ सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो ।
सरसफाइका लागि आवशयक माक्स, पञ्जाको ब्यवस्था नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भक्तपुर र कुचो, बाल्टिन लगायतका सामग्री खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुरले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता कुँवर, गैरसरकारी संस्था महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा बजगाई, यूएन ह्याविट्याट भक्तपुर जिल्ला संयोजक पार्वती दंगाल देवकोटा, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत राजुमान बज्राचार्य लगायत १९ जनाको सहभागिता थियो ।